Wafdi ka socda Turkey oo Muqdisho Jooga
Wafdi balaaran oo uu hoggaaminayo kuxigeenka ra’iisul-wasaaraha Turkey Sayn Bekir Bozdag ayaa booqasho ku jooga Muqdisho.
Wafdigan ayaa ka kooban 42 xubnood oo uu ka mid yahay safiirka Turkiga ee Soomaaliya Dr Kani Torun, Xubno baarlamaanka Turkiga ka tirsan, xubno ka tirsan gollaha wasiiradda, saraakiil iyo ganacsato Turkey ah.
Wafdiga ayaa booqday xarumo ay dowladda Turkey ka wado mashaariic horumarineed iyo dayactir ah, iyagoo dhagax dhigay garoonka diyaaradaha ee Caalamiga ah ee Aden Adde, oo Turkigu uu ka bilaabo doono hirgalinta mashaariicda ay ka mid yihiin Tower cusub, terminal cusub, iyo gidaarka amniga ee garoonka diyaaradaha.
Wafdigan Turkey ayaa maanta la kulmay ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya iyo gollihiisa wasiirada, iyadoo dhinaca kalena madaxweyne Shariif Sh. Axmed uu wafdigan xarunta madaxtooyada ugu sameeyay caawa xaflad soo dhaweyn ah.